ဗဟိုရ်စည် ဆေးရုံ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံကို Pioneer Services International Co.,Ltd မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဗဟိုရ်စည်အိမ်ရာဝင်း၊ တိုက်အမှတ် (၁-၆၊ ၃၁-၃၆၊ ၃၇-၃၈) တွင် (၆) ထပ် အဆောက်အဦး (၃) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး ကုတင် ၁၅၀ ဆန့် ဆေးရုံဖြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ် တစ်ခုဖြစ်စေရန်နှင့် လူနာများအပါအ၀င် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်သော နိုင်ငံတကာ အဆင့်အောင်မြင်မှုရှိသည့် ဆေးရုံတစ်ခု ဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ကြိုးစား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
လူနာများ၏ အဆင်ပြေစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိစေရန်နှင့် ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် ထိရောက်သော ဆေးကုသမှုများကို တစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်တိုအတွင်း ပြည့်စုံစွာရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိပါသည်။ သင့်တင့်မျှတသောဈေးနှုန်းဖြင့် ကောင်းမွန်သာလွန်သော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကို အပြည့်အ၀ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကြောင့်လည်း နာမည်ဂုဏ်သတင်းကောင်းနှင့် ရည်တည်နေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “လူသားအားလုံးကျန်းမာစေချင်သည် ဗဟိုစည်” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ထူးချွန်ထက်မြက်သော ဆရာဝန်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူနာပြုဆရာမများနှင့် အတွေ့အကြုံရင့် ၀န်ထမ်းများမှ အချိတ်အဆက်ညီညီနှင့် မိမိတာဝန်ကို မိမိကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်၍ လူနာများ၏ ကျန်းမာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ရှေးရှုကာ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
1. ၂၄ နာရီ ၀န်ဆောင်မှုများ
(1) Emergency Care Unit (အရေးပေါ်လူနာလက်ခံဌာန)
အရေးပေါ်ကုသမှုပေးရမည့် လူနာများအား ပစ္စည်းကိရိယာစုံလင်စွာဖြင့် မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ ကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
(2) Inpatient Department (အတွင်းလူနာဌာန)
လူနာအနေဖြင့် အစစအရာရာအဆင်ပြေပြေဆေးဝါးကုသမှုခံယူနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများနှင့် လက်ထောက်သူနာပြုများသည် အလှည့်ကျစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ဖြင့် လူနာအားနေ့ရောညပါ အမြဲမပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
3. Hall Type Economy Room တို့ဖြစ်ပြီးမိမိတို့ အဆင်ပြေသည့် အခန်းအမျိုးအစားကို ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
(3) Intensive Care Unit / High Dependency Unit (အထူးကြပ်မတ်ကုသဌာန)
အထူးဂရုပြုစောင့်ရှောက်ပေးရမည့် လူနာများကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝ၍ အတွေ့အကြုံများစွာရှိသော ဆရာဝန်များနှင့် ကျွမ်းကျင် သူနာပြုများသည် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများစုံလင်စွာဖြင့် ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
(4) International Standard Laboratory Services (နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဓာတ်ခွဲခန်း)
ဓာတ်ခွဲခန်းသည် မြေညီထပ်တွင်ရှိပြီးနံနက် ၈ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအထိ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ အရေးပေါ်ဓာတ်ခွဲဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် စတုတ္ထအထပ်တွင် ၂၄ နာရီ အပြည် ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။
(5) EXTRACORPOREAL SHOCK-WAVE LITHOTRIPSY (ESWL)
ကျောက်ကပ်အတွင်းမှာ ကျောက်ကိုမခွဲမစိတ်၊ မှန်ပြောင်းမသုံး၊ မေ့ဆေးမပေးဘဲခေတ်မီစက်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှ လှိုင်းဖြင့် ကျောက်ခြေပေးပါသည်။
(6) PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY (PCNL)
ခေတ်မီမှန်ပြောင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်အတွင်းမှ ကျောက်များကိုခြေပေးပါသည်။
(7) URETEROSCOPIC LITHOTRIPSY (URS)
(8) Ureteroscopic Lithotripsy (LASER)
(9) Operation Theatre Services
အဓိကကကျသောခွဲစိတ်ခန်းပေါင်း ၆ ခန်းရှိပြီးခွဲစိတ်မှုပေါင်းစုံကိုအရည်အချင်းပြည့်မီသော ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများစုံလင်စွာဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးနေပြီး C-ARM (ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် ချက်ချင်းရိုက်ကူးကြည့်ရှုနိုင်သောစက်) အပါအ၀င် ခေတ်မီရောဂါရှာဖွေရေး စက်ကြီးများဖြင့် ရောဂါအဖြေထုတ်ကာခွဲစိတ်ခြင်းကြောင့် တိကျမှန်ကန်ထိရောက်သော ခွဲစိတ်မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။
(10) Haemodialysis (ကျောက်ကပ်တုသွေးသန့်စင်ဌာန)
အရေးပေါ်ကုသရန်လိုအပ်သည်များအတွက် ၂၄ နာရီအပြည့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး သာမန်ကျောက်ကပ်သွေးသန့်စင်မည့် လူနာများအတွက် နံနက် ၇ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအထိ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကူစက်ပိုးရှိသူလူနာများအတွက် သီးသန့်အခန်းစီစဉ်ပေးထားပြီး သီးသန့်စီမံထားသောစက်ဖြင့် ကုသမှုပေးနေပါသည်။ ပုံမှန်လာရောက်ကျောက်ကပ်သွေးသန့်စင်သူ လူနာများအတွက် အထူးနှုန်းထားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
(11) Laparoscopic Surgery (ခေတ်မီအပေါက်ဖောက်အဆင့်မြင့်ခွဲစိတ်ဌာန)
နာကျင်မှုအနည်းအကျဉ်းမျှသာခံစားရပြီး အချိန်တိုအတွင်းမိမိတို့၏ နိစ္စဓူဝ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် Laparoscopic Surgery နည်းဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
(12) ECG (နှလုံးစမ်းသပ်စက်ခန်း)
Holter ECG ဖြင့် နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့် နှလုံးစီးချက်မှန်မမှန် တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ နှလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဒနာခံစားနေရသူများအတွက် ၂၄ နာရီHolter ECG တပ်ဆင်ပေးထားပြီး နှလုံးစမ်းသပ်မှု များကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ Holter ECG တပ်ထားစဉ်အတွင်း လူနာအနေဖြင့် အချိန်တစ်ချိန်ချိန်တွင် ခံစားခဲ့ရသောရောဂါလက္ခဏာများ (ဥပမာ - ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ မောကျပ်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း)နှင့် မိမိသွားလာလှုပ်ရှားခဲ့မှုများကို ဒိုင်ယာရီမှတ်တမ်းတင်ထားရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဓာတ်မှန်ဌာနတွင် တိကျပြတ်သားသောအကောင်းဆုံးပုံရိပ်များကို ၂၄ နာရီရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
(14) C-Arm (ခွဲစိတ်ခန်းသုံးအထူးဓာတ်မှန်)
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် ချက်ချင်းရိုက်ကူးကြည့်ရှုနိုင်သော စက်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးပေးလျက်ရှိပါသည်။
(15) Ambulance Services (အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု)
ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများဖြင့် ၂၄ နာရီအပြည့်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီး လူနာတင်ယာဉ်တွင် အသက်ကယ်ကိရိယာ အစုံအလင်ပါရှိသည့်အတွက် အချိန်မီကုသမှုကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ Medical Team ဖြင့် လေဆိပ်အထိလာရောက်ခေါ်ယူပေးသော ၀န်ဆောင်မှုလည်းပေးပါသည်။
(16) Reception (ဧည့်ကြိုဌာန)
နွေးထွေးပျူငှာလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုမှုများနှင့် အတူလူနာများ၏ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို အကောင်းမွန်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
(17) Pharmacy (ဆေးအရောင်းဌာန)
စစ်မှန်သောနိုင်ငံခြားဖြစ်ဆေးဝါးမျိုးစုံနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးအထောက်အကူပြု ကိရိယာများကို သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
(18) 128-slice CT Scanner Optima CT 660 with ASIR
128-slice CT Scanner Optima CT 660သည် GE Healthcare company မှ ထုတ်လုပ်သော128-slice CT စက်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစက်၏ထူးခြားချက်များအနက် လူနာများအတွက် ပိုမိုသင့်တော်ကောင်းမွန်သောအချက်မှာ CT ရိုက်ရာတွင် ASiR နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည့်အတွက် ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှု (Radiation dose) အား ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအလိုက် 40% မှ 83% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ကလေးများအား CT ရိုက်ရာတွင်လည်း များစွာအကျိုးရှိပါသည်။
(19) DEXA SCAN (အရိုးပွတိုင်းတာခြင်း)
Dexa Scan ကိုအရိုးများ၏ သိပ်သည်းမှုတိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည်။ Dexa Scan ရိုက်ခြင်းသည် ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် (Chest X-ray) ၊ တယ်လီဗေးရှင်းဓတ်ာမှန် (Ultrasound)၊ ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် (CT Scan) ရိုက်ခြင်းများကဲ့သို့ပင် နာကျင်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ။ အချိန်အားဖြင့် မိနစ် ၂၀ ခန့်သာ ကြာပါသည်။ ခါးနောက်ကျောပိုင်းအရိုးများ၊ တင်ပဆုံးရိုးများနှင့် လက်ဖျံရိုးများသည် အရိုးပွရောဂါရှိပါက ကျိုးလွယ်သော အရိုးများဖြစ်သောကြောင့် Dexa Scan ရိုက်ခြင်းဖြင့် အရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် အရိုးပွရောဂါ ရှိ/မရှိ ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
(1) Specialist Outpatient Department (ပြင်ပလူနာဌာန)
ပြင်ပလူနာဌာနတွင် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် လာရောက်ပြသရာ၌ အဆင်ပြေချောမွေ့မှု ရှိစေရန် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။
- အဆုတ်နှင့် ရင်ခေါင်းအထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းဆိုင်ရာအထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- လည်ပင်းကြီးနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- အဆုတ်နှင့်ရင်ခေါင်းခွဲစိတ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ
- ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- မျက်နှာ၊ မေးရိုး၊ ခံတွင်းအစားထိုးပြုပြင် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- ကလေးနှလုံးရောဂါ အထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- သားဖွားနှင့် မီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- အရေပြားဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
(2) ECHO CARDIOGRAM & DOPPLER SCAN (နှလုံးအထူးစစ်ဆေးခြင်း)
ECHO CARDIOGRAM (နှလုံးအထူးတယ်လီဗေးရှင်း ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း) ဖြင့် နှလုံးသွေးကြောနှင့် ဆိုင်သောရောဂါများရှိ/မရှိသိနိုင်ပြီး နှလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော မည်သည့်မူမမှန်မှုများကိုမဆိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ DOPPLER SCAN (သွေးကြောပိတ်ခြင်းရှိ/မရှိ scan ဖတ်ခြင်း) မှလည်း တိကျသောရလဒ်ကိုရနိုင်ပါသည်။
(3) Colposcopy Centre (သားအိမ်ခေါင်းကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် စစ်ဆေးပေးသောဌာန)
- သားအိမ်ခေါင်း၏ ပုံမှန်မဟုတ်သောနေရာများကိုရှာဖွေရန်
- ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်အတွက် အသားစယူခြင်းတို့ကိုအဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
- Pap smear ပုံမှန်မဟုတ်သူများကိုစစ်ဆေးပေးရန်
- သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သောအသားစ၊ မျိုးပွားအင်္ဂါကြွက်နို့ စသည်ဖြင့် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
(4) Bahosi Oncology Centere (ကင်ဆာရောဂါ အထူးကုဌာန)
- ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံရှိBahosi Oncology Centre သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသောကင်ဆာကုသမှုစင်တာဖြစ်ပါသည်။
- ကင်ဆာကုသမှုခံယူနေစဉ် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်အဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိစေရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကူညီပေးနေသည့်အပြင် ကင်ဆာရောဂါများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်များ၏ အတွေ့အကြုံ၊ ကုသမှုပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည်ကိုပြောပြကာလူနာ၏ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတက်လာစေရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးပါသည်။
- အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဆေးဝါး၊ ကုသမှုနည်းတွေနဲ့အတူ ကင်ဆာရောဂါကို အကောင်းဆုံးကုသမှုပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
- လူနာနှင့်လူနာမိသားစုများအနေဖြင့် ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်အေးချမ်းသာမှုရှိစေရန် ကုသမှုပိုင်း၌ လိုအပ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိစေဖို့ အမြဲမပြတ်လေ့လာစောင့်ကြည့်လျက် အထူးဂရုပြု စောင့်ရှောက်ပေးပါသည်။
(5) Bahosi Fertility Centre
Bahosi Fertility Centre တွင် ရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ
- အမျိုးသားသုတ်ရည်ကိုအမျိုးသမီးသားအိမ်အတွင်းထည့်သွင်းသန္ဓေအောင်စေသောနည်း (IUI)
- ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပ၌မျိုးအောင်စေခြင်းနည်းဖြင့်သားသမီးရယူခြင်း (IVF)
- မမျိုးဥတွင်းသို့ သုတ်ပိုးတိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသန္ဓေအောင်စေသောနည်း (ICSI)
- အမျိုးသား၏ ကပ်ပယ်အိတ်အတွင်းရှိအသားစမှ သုတ်ပိုးထုတ်ယူ၍ အမျိုးသမီး၏ မမျိုးဥနှင့် သန္ဓေအောင်စေသောနည်း (TESE)
- သန္ဓေသားလောင်းအား Blastocyst အဆင့်တွင် မိခင်သားအိမ်တွင်း ပြန်လည်ထည့်ပေးခြင်း (Blastocyst Transfer)
- သုတ်ပိုးအေးခဲသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် သန္ဓေသားလောင်းများအားအေးခဲသိမ်းဆည်းခြင်း (Sperm and Embryo Freezing)
(6) Home Medical Service (အိမ်တိုင်ရာရောက်ဆေးကုသမှုပေးခြင်း)
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့မှ အသက်ကယ်ပစ္စည်းကိရိယာအစုံအလင်နှင့် အတူအိမ်တိုင်ရာရောက် ဆေးကုသမှုပေးလျက် ရှိပြီးအရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ဆေးရုံသို့ အချိန်မီရောက်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
(7) Ultrasound Service (တယ်လီဗေးရှင်းဓာတ်မှန်)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့် ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သူများအတွက် Ultrasound service ကိုလည်း ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
(8) OEC Endoscopic Centre (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ဌာန)
Upper GI Endoscopy (အစာအိမ်လမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုခြင်း)၊ Lower GI Endoscopy (Flexible Sigmoidoscopy& Colonoscopy) (အူမလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုခြင်း)၊ ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreaticography) (သည်းခြေလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုခြင်း) တို့ဖြင့် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
(9) Medical Check-up Unit (ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ဌာန)
Medical Check-up Package (အထူးကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခြင်း)
Physical Examination & Reporting
အသည်းရောင် အသားဝါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စစ်ဆေးခြင်း (Hepatitis Viral Screening)
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ခုခံနိုင်အား စစ်ဆေးခြင်း
ခုခံအားကျဆင်းမှု ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စစ်ဆေးခြင်း
Syphilis / VDRL
Computerized Chest X-ray
တစ်ခုချင်းကျသင့်ငွေပေါင်း Standard Price
(အထူးနှုန်း) အတွဲလိုက်ကျသင့်ငွေပေါင်း Package Price/ Special Price
Eye Exam Screening
T & DP (Albumin, Globulin)
လည်ပင်းကြီးရောဂါ ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
ဂေါက်/ ဒူလာရောဂါ ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအသားစ စစ်ဆေးခြင်း (Cervix Screening)
Thin prep pap smear test
(အထူးနှုန်း) အတွဲလိုက်ကျသင့်ငွေပေါင်း Package Price / Special Price
Medical Check-up Package For Foreigner
အသည်းရောင်အသားဝါဘီဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စစ်ဆေးခြင်း (Hepatitis Viral Screening)
အသည်းရောင်အသားဝါဘီဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ခုခံနိုင်အား စစ်ဆေးခြင်း
ပန်ကရိယာ/ အူမကြီးကင်ဆာ ဇီဝအမှတ်အသား
၀မ်းဗိုက်တခုလုံးအား အသံလှိုင်းသုံးရောဂါ ရှာဖွေခြင်း
သတိပြုရန်နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် (For Preparation)
1.Viral Screening Package and Pre-operative Package များအတွက် (၂၄) နာရီ ပတ်လုံး ပိတ်ရက်မရှိ စစ်ဆေးပေးလျက်ရှိပြီး Viral Screening အဖြေများကို ၁ နာရီအတွင်းရရှိအောင် အမြန်ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
2. သင့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူပါရန်(နေ့စဉ် နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ)
3. ဆေးမစစ်မီအနည်းဆုံး (၈)နာရီကြိုတင်၍အစာ/ အရည်မစား/ မသောက်ရန်
4. ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံတွင် နေ့စဉ် နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
5. ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံသည် အထက်ပါဈေးနှုန်းများအား ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခွင့် ရှိပါသည်။
6. အဖွဲ့အစည်းများ၊ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းစုများအတွက်နှစ်သက်ရာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု အမျိုးအစားများကို သီးသန့်ရွေးချယ်၍အထူးနှုန်းထားများဖြင့်စီစဉ်ပေးပါမည်။
10. CME Programs (ကျန်းမာရေးပညာစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးပွားစေရေးအစီအစဉ်များ)
ဆေးပညာရပ်ဆက်လက်တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများကို (Continuing Medical Education-CME) အစီအစဉ်များပြုလုပ်ပေးသကဲ့သို့ ၀န်ထမ်းများအားလုံးအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို တိတိကျကျလိုက်နာတတ်ရန်၊ စိတ်ဓာတ်နှင့် အသိပညာမြင့်မားစေရန် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲများကို အလျဉ်းသင့်သလိုကျင်းပပေးလျက် ရှိပါသည်။